TOP: Shabaab oo ku hanjabay in Weeraro Culus ay ku qaadi doonaan Saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. – Gedo Times
TOP: Shabaab oo ku hanjabay in Weeraro Culus ay ku qaadi doonaan Saldhigyada Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
17th February 2016 admin Wararka Maanta 0
Afhayeenka howl galada Al-Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa u sheegay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab inay kordhin doonaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda iyo Ciidamada AMISOM.
XOG: Axmed Madoobe oo maanta lagu sugayay Magaalada Kismaayo ayaa ku wajahna addis ababa, xilli uu Hadda Nairobi ku suganyahay.
Dhagaysa:Kenya oo iskaga baxdey Kismaayo Airport